Okuzokwenzeka uma uZuma ehla noma engehli esikhundleni | Isolezwe
Okuzokwenzeka uma uZuma ehla noma engehli esikhundleni
All content feed / 14 February 2018, 11:07am / MHLENGI SHANGASE
UMENGAMELI Jacob Zuma okungacaci ngekusasa lakhe njengomengameli wezwe. Isithombe: SIGCINIWE
Uma uZuma egoloza ukwehla esikhundleni njengoba i-ANC isinqume ukumhoxisa kuhulumeni ingafaka ivoti lokungabuthembi ubuholi bakhe ukuze lidingidwe ePhalamende ngoba vele uMengameli noma ejutshwe yiqembu kodwa uvotelwa yiPhalamende.
Kudingeka amavoti angaphezu kuka-200 amchithayo ePhalamende elinezihlalo eziwu-400 ukuze ehle esikhundleni. Uma limudla ivoti kudingeka ukuthi aphume nesigungu sakhe soNgqongqoshe namaphini abo. Iphini lakhe, uMnuz Cyril Ramaphosa, naye uyaphuma esikhundleni.
Uma sekunjalo izintambo zokuhola izwe zizobanjwa nguSomlomo wePhalamende ngoba umengameli uzobe engekho izinsuku eziwu-30 ngaphambi kokuthi kuhlale iPhalamende kukhethwe umengameli omusha. Umengameli ube esekhetha iphini likamengameli bese ekhetha nesigungu soNgqongqoshe bakhe.
Uma enquma ukusula uthumela incwadi kuSomlomo asho ukuthi uyahoxa njengomengameli wezwe, iphini lakhe yilona elibamba izintambo zokuhola izwe. Uma esulile uhola umholo wakhe athole nempesheni yakhe aze afe.
Uma kwenzeka ekhishwa ngohlelo lwevoti lwasePhalamende olwaziwa nge-impeachment ulahlekelwa yikho konke okuthinta impesheni nezinto ezifana nonogada, izimoto, i-medical aid nokunye. Kuyaye kube sekuhlakazwa iPhalamende bese kuba nokhetho ngokushesha.
Ukhetho kumele lube khona zingakapheli izinsuku eziwu-90. Ukuze akhishwe ngalolu hlelo kumele kube ngukuthi uthunaze umthethosisekelo wezwe noma uma uhluleka ukuphatha izwe.